ဆံပင်ဖယ်ရှားမှုအတွက်လူ / လေဆာအလင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CE ဆံပင်ဖယ်ထုတ်စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | KES
ဆံပင်ဖယ်ရှားရန်အတွက်လူ / လေဆာအလင်းအတွက် Medical CE ဆံပင်ဖယ်ရှားစက်
လှိုင်းအလျား 808nm Standard755nm, 1064nm, Tri- လှိုင်းအလျား optionalChangeable Spot size9* 9, 12 * 12, 12 * 18 optional
2. ကြီးမားသောအစက်အပြောက်အရွယ်အစား, လုံခြုံခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကုသမှု။
၃။ ဂျာမန် **** III လေဆာရောင်ခြည်ထုတ်ပေးသူ၊ သက်တမ်းရှည်၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ Sapphire crystal၊ အဆက်အသွယ်အအေး၊
4. ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ရွှေစံအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သောဆံပင်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည် - အမြဲတမ်းဆံပင်ဖြုတ်ခြင်း
၅။ AS ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှအကြံပြုသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းဆေးရုံများနှင့်ဆေးခန်းများစွာကိုတရားဝင်ထောက်ပံ့ပေးသူဖြစ်သည်။
၆။ Sapphire Semiconductor အဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်အအေးစနစ်
၇။ Professional နှင့် Intelligent operation system အတွက်၊ parameter များကိုသိမ်းနိုင်သည်
Medical CE ဆံပင်ဖယ်ရှားရေးလေဆာရောင်ခြည်သုံး bikini / diode lase ...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်စက် KES man ...
Medical CE အမျိုးသမီးဆံပင်ဖယ်ရှားစက် / diode 80 ...
Medical CE system 808 လေဆာ / စျေးပေါသောဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း ...
808nm Diode လေဆာစက်